2007 Sicela nilethe abahleli abasha | Martech Zone
Lwesibili, Disemba 26, 2006 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Omunye wami Ukubikezela ye-2007 ingumhleli omusha wewebhu osebenza ngokusebenza 'kokuhlela endaweni'. Ngiyawuthanda umqondo wokuhlela endaweni… kunokuba ungene ngemvume ngokuphatha okuhluke ngokuphelele, umsebenzisi angavele aqale ukuthayipha futhi akhe i-HTML indlela abafisa ngayo.
Nazi ezinye eziphelele okufakiwe kwebhulogi ku-Hlela endaweni kusuka kuJoseph Scott. Uma ungewona umqambi futhi uzibuza ukuthi ngikhuluma ngani, nansi ikhasi lesibonelo. UJoseph unomusa ngokwanele wokwenza wonke umsebenzi wakhe utholakalele ukulanda.
Ngibheke phambili kothile owakha isihleli esisha ngokuphelele ngokungafani i-plain 'ol Microsoft Word editor ebonakala ngathi iyavela yonke indawo kuwebhu. Kubukeka sengathi noma iMicrosoft ibheyili kulowo ngeHhovisi 2007 ngesixhumanisi esisha 'seRibhoni'. Kubi ngokwanele eHhovisi lamanje (ngabe ukhona umuntu ongathola izinhlamvu ukuthi zisebenze kahle?), Manje kufanele sikubone kuyo yonke iwebhu? Ngisho ne-Google Docs isebenzisa isihleli esifanayo (futhi izinhlamvu azisebenzi lapho, noma).
Sidinga i-paradigm entsha yokuhlela amadokhumenti, izethulo, i-html, i-imeyili njll. Ukuhlelwa endaweni kungaba ukuqala kwale paradigm. Ngifunde isilinganiso esihle ku Ama-Mavericks Emsebenzini: Kungani Imicabango Yangempela Kakhulu Kwezebhizinisi Iwina kule mpelasonto evela ku-ING Direct ka-Arkidi Kuhlmann:
Uma wenza izinto ngendlela wonke umuntu azenza ngayo, kungani ucabanga ukuthi uzokwenza kangcono?
Izinkampani eziningi, amasayithi, amabhulogi, njll kanye nokuxhumana nge-imeyili, sekuvele kunesitayela esichaziwe kufomethi yomsebenzi wabo. Cabanga ngohlelo lokusebenza lapho umphathi womkhiqizo wenkampani angamane anamathisele ishidi labo lesitayela kuhlelo lokusebenza bese "uhlela endaweni yalo" ingabe konke okunye ?! Bekungeke yini lokho kufezeke?
Ukuhlela kungaba phansi embhalweni nasezithombeni… inani lezinkinobho namamenyu lingakhawulelwa ngokuphelele. Kwabanye, mhlawumbe kungumbhalo nje ocacile ukuthi abantu bavunyelwe ukungena hhayi okunye okunye!
Ngubani olungele ukuyakha?
Tags: CMSukuphathwa kokuqukethweizinhlelo zokuphathwa kokuqukethwehlela-endaweniumhlelihtml umhleliumhleli wombhalo
Thenga uthengise amakhadi wesipho ku-inthanethi!